Qaybta Labaad – Part 3
In badan baa lays weydiiyay sababta xamar u degi la’ yahay. Had iyo jeer jilayaal horleh (new actors) iyo arrimo horleh baa soo baxaya. Maxaa Xamar 18ka sano weli shidaya? Amxaaradu mar dambay noo timid. Soomaalidu waxay horay u yiqiineen ama maqli jireen Sadaqa Jaariyah, waxaase 1991kii, markii ugu horreysay la bartay oo bilawday Dulmun Jaari - mid geerida qofka keddib weli socda! (Digniin: waa sarbeeb! Sidaan oraahda u qoray ulama jeedo, ee akhristoow, haygu soo boodin, adigoo ‘bisinka’ ‘bisinka’ leh ). Dulmi wayraxsanoo MIRQAANSAN oo ku shaqaynayaa nidaamka dubnaddu isugu dhacdhacdo, markii midkood la taabto (Domino effect) oo aan la joojin karin baa bilawday.
Xamar waxaa kasoo dhacay welina ka dhacaya dulmi noocyadiisa kala duwan iyo argagax farabadan oo aan ruuxna horay u saadaalin Karin. Waa dhab in degmooyin kale oo gobollada kale ka tirsan ay arrimo naxdin lihi kasoo dheceen welina ka dhacaan iyagoo teelteel ah. waxaanse qabaa in aysan jirin wax ka daran dhaawaca iyo haaraha ka muuqda ex(ekis) Xamar Cadde. Cid iyo wax loo aabbayeelay ma jirin. Naflay, hanti gaar ah, waddooyin, dhismayaal taariikheed, madxaf, maktabaddo, taallooyin, gaadiid, xafiisyo, isbitaallo, dugsiyo,jaamacado, dukaammo, suuqyo. Iwm. ayaa si caqliga ka baxsan loogu galgashay. Hubka noocyadiisa kala duwan baa laga adeejiyay!!! Waxaan soo xusuustay oraah uu yiri filosoof Maraykan ahaa oo la oran jiray Abraham Maslow (1908 – 1970) : “Haddii qalabka keliya ee aad haysatid uu burrus yahay, waxay dhibaato walba kuula muuqanaysaa musmaar oo kale…If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail”.
Xamar wuxuu noqday meesha keliya ee qof gacan ku dhiigle ahi uu si nabdoon ugu noolaan karo. Markaad u fiirsatid dilalka ka dhaca gobollada oo idil, waxaad arkaysaa in qof qof dilay oo la og yahay uusan degmadiisa ku dhex noolaan karin. Wuxuu ku khasban yahay inuu baxsado.
Haddaba, Ilaahay baa Xamar ku imtixaamay waxaan layska dhicin karin oo aan la arki karin. Daruuro biyahoodu ay yihiin:
• Nabsi ururoo qamuunyeysan & Inkaar xiimaysoo hurguntay,
• Habaar gagabayoo ilmeynaya & Naxdin bararsanoo buufis wadata,
• Murugo caraysan oo qamaamaysa & Rooxaan noocyadeeda kala duwan baa xamar la kor dhigay!!!
Xamar caddihii Soomaalida u ahaa caasimadda,wuxuu isu badadalay guri gudcuroo qolol iyo musas badan oo nabsi iyo rooxaan kor heehaabayaan (Ghost house). Markaad wax yar u fiirsatid amuuraha ka dhacaya Xamar, waxay ku xusuusinayaan filimada naxdinta leh (horror films). Cid Alla ciddii soo gashaba waxbaa si ka noqonaya!!. Xataa hubkii yiillay baa ku wareeray! Xabbaddii la ridaba, meelaan loogu talagelin bay aaddaa ama ku habsataa, iyadoo ‘Habow’ ah !!! Ma rooxaan iyo nabsi baa shaqaynaya? Ma shiishxumaa jirta? Mise waa mirqaan xad dhaafay musaraarkiis (jidbadiis ama bururkiis)!?
Mar Alla markaad is tiraahdid,’Allaylaha haddaa wax inoo hagaagayaan’, dhinac bay ka fikanaysaa!! Xataa qoladii maxkamadaha ee kitaabka wadatay, waxbaa si ka noqday! Qaar ka mid ah xubnahooda xamar ku sugnaa, ayaa wax is tuseen (malaha rooxaantii baa taabatay!) oo is arkay iyagoo Baydhaba ku tukanaya, oo Adis abeba usii socda. Keddibna Tigree ka itaal roon baa lugu salladay!!
Waxyaalaha ku tusaya in xaalka Xamar uusan caadi ahayn, waxaa ka mid ah, barakicii ugu dambeeyay ee ugu orodka gaabnaa. Markii loo cararay duleedka Xamar (geedaha hoostooda), rag baa la yiri, waxay bilaabeen inay geedaha dadka ka ijaaraan!!! Rag kalaa, iyana la yiri, waxay dadkii u diideen inay magaalooyinka dhowdhow gaaraan, sida Afgooye, iyagoo ku leh,’war haddaad sii fogaataan, xamar dib ugu noqon maysan,oo waa la idiin dabamarayaa…Halkiinna jooga, annagaa dhaqaale iyo gargaar idiin soo direynee!!!’.
Xamar waxaa 1991kii ka bilawday dulmi ku socda nidaamka cayaaraha orodka qori isu dhiibka (Relay). Orodka laba (2) Halgame oo isku koox ah oo kala jira ayaa si cayaarxumo (unfair play) ah - Garsooraha (referee / arbitro) oo aan weli firinbiga yeerin – u bilaabay, iyadoon kooxihii (jabhadihii) kale aysan soo wada gaarin garoonka cayaaraha ((Xamar).
Orod xaraarad leh oo labadii bilaabay buska looga tegey markii dambe, baa rag badan u bilawday. Wareeg walba rag baa looga tegayey, markii kabuhu ka dhammaadaan oo caguhu dildilaacaan! Orodka dulmiga waxaa istaajiyay Maxkamadaha Islaamiga ah!
Muddo keddib, markii DKMG iyo Isbahaysigu damceen inay wada fariistaan, Isbahaysigii baa kala booday! Haddana waxaa ku xigay in DKMG ay iyaduna markeeda kala boodday!! Markii iyagiina dibedda lugu soo heshiisiiyey baa madaxdii isbahaysigu is hardiyeen oo ay meel xun ka gaadhay. Midba midka kaluu ku eedeeyay inuu xaqii iyo tubtii toosnayd ka leexday!! Ugu dambaystiina, laba(2) Caalim oo isku dariiqo ah ayaa qaabkii iyo xeeshii dibuxoreynta ku kala xanaaqay oo kala degay (Asmara & Jibuuti) !!! Wadeeca Alla!!! War yaa noo islaama??? Mar walba qolo ama qof baa dhinac u baxa ama dhex taagan, isagoon tanaasul oggolayn oo kelyaha haysta!! .....Isbaara daa’imah!!!
Tiradii (2) ay ku bilaabatay 18 sano ka hor ayay ku soo noqotay, iyadoo weji kale leh….. Checkmate!!! - ‘Asmara gar leh, Jabuutina gar leh’…Reloaded!!!
Laba gabay oo uu tiriyay Cismaan Y. Keenadiid (Allaha u naxariistee) dhawr iyo afartan sano ka hor, oo aad mooddid inuu hadda ka hadlayo, baa waxaa ka mid ahaa:
• Aqoonyarana Soomaali bay iil ka dhaadhicine
• Arrinxumo ninkeedii intuu eedayaa badane
• Asbaab ay dhigeen buu ku yimid amarka haystaaye!!!!
• Iyagaa libaaxyo isu noqon oo islaarriyiye
• Midba inuu walaalkii legduu leebyaduu tumane!!!
• In laftood jabaysiyo ma oga le’ashadoodaase!!!
Intaas keddib, waxaa isweydiin mudan, sidee buu ahaa xaalka iyo xiriirka ka dhexeeyay beelaha (qabiilooyinka) soomaaliyeed, ka hor intaan xornimadu imaan?
Soomaalida waxaa lugu tilmaamaa dad 90% reer miyi ah. Waxaa ka dhexeeya isir, af, diin iyo dhaqan isku mid ah. Duullaamadii iyo dagaaladii ka dhex dhici jiray, waxay inta badan ka dhalan jireen Ceel (biyo) iyo Caws (daaq). Waxaa had iyo jeer isku dhici jiray beelaha deriska ah. (Dhirtu siday isu xigtay isu xoqdaa). Wax kastoo beelaha ka dhex dhacana, rag baa ka arrimin jiray, oo geed hoostiis iyo gogol baa lugu kala gar iyo mag qaadan jiray. Taariikhda inta aan ka ogahay, luguma hayo, beelweyn si wadajir ah ugu duushay mid kale, iyadoo rabta inay wada tirtirto! Ma jirin colaad soo jireen ah oo ka dhexeysay afarta beelweyn ee soomaalida.
Beelaha Deelka iyo Ha’du, waa laba beelood oo aan isku degaan ahayn. Badankoodna isma dhex dego, ismana yaqaanaan!
Intooda yar ee ee cirbahoodu is xigaan (Jiinka & Qaafka) baa is yaqaan. Taariikhda luguma hayo (tusaale ahaan), meel iyo goor ay ‘Ariboowe’ iyo ‘Arreey’ isku dheceen!!! Taariikh aan jirin baa inta laga been abuurtay, lugu awr kacsaday. Muddo keddibna, dad aan badnayn baa been abuurkii fahmay, iyagoo leh ‘waa nala khalday ( nala ajaray)!.
Si xun u isticmaalka taariikhda (misuse of history) horaan ugaga soo hadlay maqaalkii ahaa ‘Awr ku kacsi), waxaa noocyadeeda ka mid ah: dhacdooyin dhab ah oo la inkiro(denial); laga been-abuuro (falsification); layska laalaadiyo dhacdo gaar ah (fixation on a particular event); aan la sheegin (omission); aan aqoon loo lahayn (ignorance); loo dhiig-miirto ujeedooyin banaanka ka ah dartood (exploitation for extraneous purposes); iwm.
Waxaa la yiri,Qabyaaladdu (tribalism) waa sida geed weyn oo kale. Qaybta ugu xoog badani (xididdada) waa u qarsoon tahay. Xididdadu(roots) waxay ku dhex jiraan ciidda(shacabka).
Waana halka ay ka nafaqo iyo shidaal qaataan! Iyagaa ciidda ku nool ee ciiddu uma baahna. Haddii la faago(qodo) oo xididdada bannaanka lasoo dhigo, geedku (qabyaaladdu) wuu dhimanayaa.
Haddii kalase, intuu koro oo sii ballaarto, ayuu yeelanayaa laamo ad adag iyo caleemo fara badan. Hadba markii laan laga jebiyo ama caleen ka dhacdo, kuwo kale (qabqableyaal horleh) ayaa u soo baxaya. Sababtoo ah ciiddaa (shacabka) nafaqo iyo shidaal mar walba diyaar ula ah.
Waxaynu nahay ummad 95% maskaxda iyo garaadka laga haysto, oo aan xor u ahayn, xataa ku dhaqanka Diinta aynu wada sheeganayno! Ayaandarrada na haysatana, waa qolooyinka na haysta oo aan ahayn kuwo dagaal iyo wax iska caabin laysaga xoreyn karo. Qolooyinku waa dad beri hore jiri jiray oo reer aakhiraad (Ahlu qubuur) noqday, (Alyacni Odayaasha iyo Habraha lugu abtirsado).
Waa dad aadan waxtar iyo waxyeello toona gaarsiin karin, iyaguna waxba ku tari karin. Haddii ragga ku adeegta ahlu qubuurta iyo beelahoodu xisaabtami lahaayeen, wax badan baa isfurfuri lahaa:
- War aan codka ku siinnee ama aan kuu dagaallannee,maxaad beesha u haysaa?
- Maxaad beesha uga qabanaysaa arrimaha waxbarashada, caafimaadka, nabadgel-
yada, garsoorka, siyaasadda iyo adeegga bulshada?
- Hadafkaadu ma wuxuu ku kooban yahay beesheenna mise gobolkeenna mise soomaaliweyn oo dhan?
- Aragtidaada hoggaamiyenimo, ma waxay ku wajahan tahay annagoo dhan (tus. reer Lugyahan iyo Misigyahan) mise reer Kubyahan oo keliya baad madax u tahay?
Ragga ku qaraabta ahlu qubuurta wax dan iyo maslaxa ah uma hayaan beelahooda. Beeli waa jaranjaro ay danahooda ku gaaraan oo keliya. Faa’idada iyo mirqaanka keliya ee ay xubnaha beeli haystaan waa: ‘Nin annaga ah baa halkaas ka taliya ama xafiiskeer fadhiya ama ciidankaan wata!!!’ iwm.
Arrinta Ahlu Qubuurta waxaa in badan ka hadlay wadaaddada samankaan ugu firfircoon ee Salafiyiinta. Illaa xadna way ku guulaysteen inay caamada ka dhaadhiciyaan, in Ahlu qubuurta (tus. awliyo, culimo iwm.) oo la baryaa ay dembi tahay. Waxayse ka leexdeen, illoobeen amaba ku dhici kari waayeen inay si toos ah oo aan gabasho lahayn uga hadlaan, farta ku fiiqaan oo magacaabaan Odayaasha iyo Habraha iyo weliba geedaha iyo bahaladda lugu abtirsado!!!Mise waa gartoodoo laftigoodaba waa lugu dheggan yahay!! Mise ‘Litacaarafuu’ bay si kale u fahmeen, waa iyagaa maxkamadihii islaamiga ku dhisay nidaamka Ahlu qubuurtee???
Qaybta saddexaad – Part 3 la soco qeyb kale